Uncategorized Archive - ZONESUN နည်းပညာ LIMITED
စက်လုံခြုံမှုကိုစစ်ဆင်ရေးစည်းမျဉ်းများတံဆိပ်ခတ် 1. စက်အော်ပရေတာတက်မဖွင့်ခင်, လုပ်နိုင်သည် - တံဆိပ်ခတ်စက်၏ချောဆီကိုအချက်များအတုရေနံသေနတ်များနှင့်အတူအမဲဆီသို့ဖိနေကြသည်, သို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်ချောဆီ. 2. ထုတ်လုပ်မှုမပြုမီလက်ကိုလက်ဖြင့်လှည့်ပါ. လှည့်တဲ့အခါမှာ, စစ်ဆေးရန်ဘီး၏မြှားအမှတ်အသားကိုနှိပ်ပါ. တင့်ကားဝင်ပေါက်ရှိမရှိ, အနိမ့်အဖုံး, turntable နှင့်စက် ဦး ခေါင်း ...
Double-sided Labeling Machine ၏ကောင်းမွန်သောအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အသုံးပြုမှု
Double-sided တံဆိပ်ကပ်စက်များကိုအစားအစာများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်, ကစားစရာများ, နေ့စဉ်ဓာတုပစ္စည်းများ, အီလက်ထရောနစ်, ဆေးဝါး, သတ္တု, ပလတ်စတစ်, ပုံနှိပ်နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ; လေယာဉ်များ၏အခြေခံသဘောပေါက်, ထုတ်ကုန်များ၏ဘေးထွက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ, မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကျယ်ပြန့်သောစတုရန်း. ချိတ်ဆက်မှု၏တည်နေရာတိကျမှန်ကန်မှုသည်ကောင်းမွန်သည်, အရည်အသွေးမြင့်မားသည်, နှင့်တည်ငြိမ်မှုမြင့်မားသည်; အတုသက်ရောက်မှုတားဆီး: ထုတ်ကုန်တံဆိပ်ကပ်တိုးတက်အောင်,…
ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် Filling စက်၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
ထုပ်စက်များသည်အဓိကအားဖြင့်ထုပ်ပိုးသည့်စက်ယန္တရားများတွင်ထုတ်ကုန်သေးသေးလေးများဖြစ်သည်. ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ၏ရှုထောင့်ကနေ, သူတို့အရည်အဆာစက်များသို့ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်, အဆာစက်များငါးပိ, အမှုန့်အဆာစက်, နှင့် granular အဆာစက်; ၎င်းကို Semi-Automatic အဆာစက်များနှင့်အလိုအလျောက်ဖြည့်သည့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများအဖြစ်ခွဲထားသည်. အလိုအလျောက်အလိုအလျှောက်စက်၏အသုံးပြုမှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအသေးစိတ်များမှာ…
ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အတူအလိုအလျောက်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစက်တွေအမျိုးအစားများကိုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အခြေခံမူအလားတူဖြစ်ကြသည်. အဆိုပါပုံဆွဲပြားချပ်ချပ်တံဆိပ်စက်များ၏သိထားပုံဖြစ်ပါတယ်, အရာပြားချပ်ချပ်အရာဝတ္ထုများ၏တံဆိပ်ကပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြသထားတယ်: တံဆိပ်လိပ်တစ်လိပ်တံဆိပ်တပ်စက်၏ unwinding roller ပေါ်တွင်တင်ထားသည်. roller အစုတခုတံဆိပ်စေသည်, ရပ်ပြီး…
မည်သို့ပင်မဆိုထုတ်ကုန်၏, အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအဘို့ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်, အချို့သောထိုကဲ့သို့သောပြfailနာများသို့မဟုတ်ပြproblemsနာများရံဖန်ရံခါပေါ်ပေါက်လိမ့်မည်, လူ့ခန္ဓာကိုယ်လိုပဲ. ပြားချပ်ချပ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၏တိကျသောတံဆိပ်ကပ်ခြင်းပြtheနာကိုဖြေရှင်းရန်အောက်ပါဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အဆင့်များကိုအဆိုပြုထားသည်. ပြproblemsနာများကိုတစ် ဦး ချင်းစီရှာဖွေတွေ့ရှိရန်တံဆိပ်ကပ်စက်ပေါ်တွင်အေဂျင်စီများနှင့်စတင်သင့်သည်။ …
တရုတ်၏အဖျော်ယမကာ၏လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, နို့နှင့်ဘီယာစျေးကွက်သည်လည်းထုပ်ပိုးစက်ယန္တရားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်. 1980 ကတည်းက, တရုတ်ဟာအဖျော်ယမကာပမာဏများစွာကိုတင်သွင်းခဲ့တယ်, နှစ်စဉ်နို့နှင့်ဘီယာထုပ်ပိုးစက်ယန္တရား, နှင့်သွင်းကုန်အရှိန်အဟုန်နေဆဲတိုးပွားလာသည်. ဤစက်အများစုသည်မြန်နှုန်းမြင့်သောအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများဖြစ်ပြီးခိုင်ခံ့မှုနှင့်မြင့်မားသော…